Kulan looga hadlaayay Amaanka oo lagu qabtay Gaalkacyo – Radio Muqdisho
Kulankan oo ahaa mid looga hadlaayay adkeynta amaanka deegaanada maamulka Galmudug ayaa waxaa lagu qabtay xarunta Taliska Boliiska ee magaalada Gaalkacyo, waxaana ka qeybgalay saraakiisha laamaha Amniga, mas’uuliyiin ka tirsan maamul Galmudug iyo maamulka magaalada Gaalkacyo.
Sidoo kale kulanka ayaa waxaa ka qeybgalay gudoomiyaha Baarlamaanka maamulka Galmudug ahna siihayaha xilka Madaxweynaha ee maamulkaasi Mudane Xasan Maxamuud Heyl.
kulanka uu ahaa mid saacado dheer qaatay ayaa intii uu socday waxaa saraakiisha Boliiska ay warbixino ku aadan qaabka loo adkeynaayo amaanka maamulka Galmudug siiyeen gudoomiyaha Baarlamaanka maamulkaasi.
Korneel Cabdi Jaamaca oo ah Taliyaha Boliiska ee maamulka Galmudug oo kulanka ka dib saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in kulanka maanta uu ahaa mid wax badan looga arinsaday xaaladaha ku saabsan Amniga iyo adkenytiisa isla markaana mas’uuliyiintii kulanka ka qeybgashay isku raaceen in ahmiyad gaar ah la siiyo arimaha amaanka.
Taliyaha ayaa sidoo kale shacabka ugu baaqay in ay gacan ka geystaan xaqiijinta amniga isagoo sidoo dhanka kale booq u direy dadka ku dagaalamaya qaar kamid ah gobolada dalka in ay si dhaqso leh u joojiyaan dhiiga daadanaya.
Gudoomiyaha Baarlamaanka maamulka Galmudug ahna sii hayaha xilka Madaxweynaha maamulkaasi Mudane Xasan Maxamuud Heyl ayaa dhankiisa sheegay in hay’adaha amaanka looga baahan yahay in ay sii labo laabaan dadaalada lagu adkeynaayo Nabadgeliyada deegaanada maamulka.
Xasan Maxamuud Heyl Gudoomiyaha Baarlamaanka Galmudug ayaa sidoo kale sheegay in kulamada looga hadlaayo xaqiijinta amaanka iyo xasiloonida ay ahaan doonaan kuwo joogto ah.